ဒီဇင်ဘာ, 2019 | Santotoro
လ - ဒီဇင်ဘာ 2019
Posted on ဒီဇင်ဘာ 30, 2019 by admin
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ အနက်ဆုံးသောရေငတ်ခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံရှာခြင်းအတွက်တစ်နေ့လုံးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
အနည်းဆုံးယူကေတွင်နေထိုင်ခြင်း၊ သေခြင်းနှင့်အကြားအရာအားလုံးတို့ကိုအရက်ဖြင့်တွေ့မြင်ရသည့်ဟန်ဂိုဗာများသည်လူမှုရေးထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်သောအသိုင်းအဝိုင်းထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ... Read more
Posted in PostsLeaveaComment on Hangover ဖယ်ရှားပစ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
သမိုင်းအစဉ်အလာအရအမျိုးသမီးများ၏ကျန်းမာရေးဇီဝကမ္မကုထုံးသည်သားဖွားမီးယပ်များကိုသာဖုံးအုပ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးများကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်နောက်ကျောနာကျင်မှုနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းနာကျင်မှုအတွက်ကုသပေးသည်။ ... Read more
Posted in PostsLeaveaComment on အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးရူပကုထုံးဆရာဝန်ကဘာလုပ်လဲ။
ဆေးကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆောင်းရာသီမှာလူတွေဟာအအေးမိခြင်းနှင့်တုပ်ကွေးဖြစ်လေ့ရှိတာကြောင့်လူတွေကရာသီဥတုအေးတဲ့အချိန်မှာအိမ်ထဲမှာအတူတကွစုဝေးနေကြလို့ပါ။ ၎င်းသည်ရှင်းလင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ... Read more
Posted in PostsLeaveaComment on နွေရာသီမှာအအေးမိနိုင်မလား?
လိင်အင်္ဂါပြောင်းလဲခြင်းသည်လိင်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်သဘာဝကျသော်လည်းအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှမည်သည့်အသက်အရွယ်မရွေးလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံစားခွင့်ရှိသည်။ မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ်နှင့်မိတ်ဖက်များ၏ ... Read more
Posted in PostsLeaveaComment on နောက်ပိုင်းဘဝ၌ကြီးသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း
Posted on ဒီဇင်ဘာ 29, 2019 by admin
နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ အကှေ့၊ နားနှင့်ရင်ဘတ်တို့တွင်များသောရောဂါများသည်ဗိုင်းရပ်စ်များဟုခေါ်သောပိုးမွှားများကြောင့်ဖြစ်သည်။ တုပ်ကွေးကဲ့သို့သောရောဂါများသည်လည်းဗိုင်းရပ်စ်များကြောင့်ဖြစ်ရသည်။ ... Read more
Posted in PostsLeaveaComment on ငါဘာကြောင့်ပantibိဇီဝဆေးတွေကိုမသတ်မှတ်ခဲ့တာလဲ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ‘စံပြ’ ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဌာန်ကိုပုံဖော်ရန်တာ ၀ န်ယူလေ့ရှိသောဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်၊ လူတို့သည်သူတို့၏အသွင်အပြင်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာခြင်းတို့သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ ... Read more
Posted in PostsLeaveaComment on သင်၏သွားများကသင်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပုံ
လူအများစုတွင်သူတို့၏အသွင်အပြင်ကိုမယုံသင်္ကာဖြစ်သည့်နေ့များရှိသည်။ သို့သော်သင်၏ရေရှည်တွင်သင်ကြည့်သည့်ပုံစံနှင့်ရုန်းကန်နေရခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic disturb (BDD) ၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ... Read more
Posted in PostsLeaveaComment on နွေရာသီတွင်အနုတ်လက္ခဏာခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း
Posted on ဒီဇင်ဘာ 28, 2019 by admin
အဘယ်ကြောင့်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ? ယခုအဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းကကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင်တားဆီးလို့ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းကလူတွေကိုကယ်တင်တာပဲ။ ... Read more
Posted in PostsLeaveaComment on Smear စမ်းသပ်မှုဒဏ္sာရီသည်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်
Posted in PostsLeaveaComment on လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာတွေသိထားရမလဲ
သဘာဝတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်သုတေသနမှတွေ့ရှိချက်အရလိင်အင်္ဂါမှမွေးဖွားသောကလေးငယ်များသည်အူမှဗက်တီးရီးယားအမျိုးမျိုးရှိပြီး microbiome ဟုခေါ်သည်။
Posted in PostsLeaveaComment on C-section မှကလေးငယ်များသည်လိင်အင်္ဂါမှမွေးဖွားသူများနှင့်အူလမ်းကြောင်းဘက်တီးရီးယားများကွဲပြားသည်